Ozone oyi akwa anaghị ewusi ike na mpaghara ndị mmadụ kachasị biri na mbara ala | Netwọk Mgbasa Ozi
Ozo ozone anaghị ewusi ike na mpaghara ụwa ndị mmadụ kachasị bi na ya
Ozone oyi akwa, nke na-echebe anyị site na radieshon ultraviolet, na-ada mbà. Ọ bụ ezie na oghere dị na Antarctica na-emechi, n'akụkụ ndị mmadụ bi na mbara ala na-abụghị nke na-eme: ntụgharị nke ozone na-ebelata.
Ọ bụ ezie na amatabeghị ihe kpatara nke a, ndị ọkachamara na-ekwu na onye kpatara ya bụ mmadụ, ma ọ bụ karịa n'ụzọ ziri ezi, nsị na-emetọ ikuku nke ọ na-emepụta na mbara igwe.
Ozone bụ gas dị oke ike nke, karịa, nwere ike ịkpata ọnwụ nke ọtụtụ mmadụ, mana na elu ikuku kachasị elu, na anya nke ihe dịka 15 ruo 50 kilomita, ọ bụ ọta nchekwa kachasị mma nwere ike inye anyị .wa. N'ebe ahụ mkpụrụ ndụ ozone, nke mejupụtara atọ atọ oxygen, ọnyà ruru 99% nke ụzarị ultraviolet na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ radiation radiation infrared niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka oyi akwa a, ndụ agaghị adị ka radieshon ga-agba anụ na osisi ọkụ.
Mara nke a, sịkwa na kemgbe 1985, afọ nke a hụrụ oghere n'ime oyi akwa a na Antarctica, ndị isi ụwa niile kwenyere na ha machibidoro chlorofluorocarbons (CFC). CFCs, nke dị na ikuku na ikuku, n'etiti ndị ọzọ, na-eme ka oyi akwa ozone belata. Agbanyeghị, mmachi a belatara ojiji ya, emeghị ka oyi akwa sie ike.
Dabere na nyocha, nke dabere na nha site na satịlaịtị, ballo ballons na ihu igwe na usoro kemịkal, ozone ịta ahụhụ dị n'etiti na ala akwa nke stratosphere anọgidewo na-ebelata. N'ezie, enweela ọdịda nke nkeji 2,6 Dobson. Ọzọkwa, na ikuku oyi nke ikuku na-arịwanye elu, nke bụ nnukwu nsogbu n'ihi na, dị ka anyị kwurula, ngafe nke ozone na-egbu ndụ.
Maka ozi ọzọ, eme pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozo ozone anaghị ewusi ike na mpaghara ụwa ndị mmadụ kachasị bi na ya
Arctic ice na-agbaze n'oge oyi kwa